Collen spoke at the Pray for Zimbabwe rally in Cape Town, 11 November, and at the Summitin January.
Would you be willing to phone, or write a letter of protest to the South African Embassy closest to you, and/or to Home Affairs (Tel: 018-363-3853 ; Postal Address: Private Bag X2034, Lerato, Zeerust, 2880), and perhaps the SAPS (Tel: 018-3672 Ext.3; Address: P O Box 3, Nietverdiend, 2874) concerning the treatment of Zimbabwean refugees such as Collen Makumbirofa? To hand over a Zimbabwean Human Rights Campaigner to the Marxist government of Mugabe’s ZANU is like a death sentence. Please make Collen’s plight known, mobilise prayer for him at your congregation and request your elected representative to protest the plans to endanger this courageous Zimbabwean’s life.
For more information on the state sponsored terrorism in Zimbabwe visit:www.frontline.org.za